တစ်ဦးကောင်းမိတ်ဆွေကဘာလဲ? — Steemit
ချစ်ကြည်ရေးကျနော်တို့ထင်ထားတာထက်ပိုစိတ်မကောင်းစရာဝေဝါးဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်အရာကိုတစ်စုံတစ်ဦးကတစ်ဦးမိတ်ဆွေကောင်းစေသည်? အများကြီးအတှငျးပြီးနောက်ကျွန်မမိတ်ဆွေကောင်းသင်တို့ပတ်လည်အပြုသဘောခံစားရသူတစ်ဦးကိုသင်နက်နှင့်သဘာအဆင့်တွင်အတူချိတ်ဆက်သူတစ်ဦးဦးနှင့်ခြွင်းချက်မရှိသင်တို့အဘို့ဂရုစိုကျသူတစ်ဦးဖြစ်ပါသည်ယုံကြည်ပါတယ်။ ဤသုံးပါးသောဒြပ်စင်ကိုငါ့ထံသို့မိတ်ဆွေကောင်းပါဝင်သည်သောအရာကိုဖြစ်ပုံရသည်။
သငျသညျအများအားဖြင့်တစ်ဦးအချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ဝှမ်းအနုတ်လက္ခဏာခံစားရလျှင်, ဤပုဂ္ဂိုလ်ကိုအများဆုံးဖွယ်ရှိသင်၏အဆွေခင်ပွန်း, ကုန်အံ့တစ်ဦးတည်းနေတဲ့မိတ်ဆွေကောင်းမဟုတ်ဘူး။ သငျသညျအတူတူဖြစ်ကြသည့်အခါတစ်ဦးကမိတ်ဆွေတစ်အပြုသဘောတုန်ခါချွတ်ပေးသင့်ပါတယ်, သင်သည်ဤအပြုသဘောဆောင်သည့်အပြန်အလှန်ဖော်ဆောင်ရန်သင့်ပါတယ်။ A ကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေတစ်ဦးကအပြုသဘောသင်၏အသက်တာအပေါ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုမဟုတ်, သင်သူ့ကိုသို့မဟုတ်သူမ၏ (ဘဝနှင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာအပေါ်သိကောင်းစရာများ) ဝန်းကျင်အခါသင့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုယူခံစားမိသူတစ်ဦးဖြစ်သင့်သည်။ သင်သည်များစွာသောထောင့်မှာချစ်ကြည်ရေးနှင့်အတူကြွယ်ဝပြည့်စုံလျက်ရှိသောဒါဒါကသြဇာလွှမ်းမိုးမှုမကြာခဏ, သင့်အသက်တာ၏နေရာအများအပြားသို့ချဲ့ထွင်။
တစ်စုံတစ်ဦးကအတူနက်ရှိုင်းနှင့်သဘာ connection ကိုရှာဖွေခြင်းပိုမိုလွယ်ကူပြုသောအမှုထက်ကပြောသည်ဖြစ်ပါတယ်။ သင်ထိုကဲ့သို့သောအဆင့်တွင်သင်နှင့်အတူချိတ်ဆက်နိုင်သူအထူးတစ်စုံတစ်ဦးအဘို့သင့်ဘဝတဈခုလုံးကိုရှာပေလိမ့်မည်။ ဤသည်ဆက်သွယ်မှုသင်ပင်ပထမဦးဆုံးအစည်းအဝေးကိုအပေါ်ကိုသင်ချက်ချင်းအချင်းချင်းနားလည်ကြောင်းယခင်အသက်တာ၌ရှေ့တော်၌တွေ့ဆုံခဲ့ပြီး, ဒါမှမဟုတ်လျှင်ကြောင့်မကြာခဏဖော်ပြထားကြောင်းဒါကြောင့်ထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ လူနှစ်ဦး၏ဤချက်ချင်းနှိပ်ပြီး (စိတ်ပညာယနေ့တွင်) မကြာခဏဇီဝဗေဒနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်။ တခါတရံမှာနားမလည်နိုင်လောက်အောင်, မိတ်ကောက်ကာငင်ကာပြုလုပ် shared ကွန်နက်ရှင်အပေါ်အခြေခံပြီးအချိန်များတွင်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။ ဤသည်ဆက်သွယ်မှုနှစ်နှင့်အဘယျသို့သူတို့ကိုလူအများစုထက် သာ. ကြီးမြတ်သောအတိမ်အနက်မှာတစ်ဦးချင်းစီကတခြားကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ခွင့်ပြုဘို့အတူတကွမိတ်ဆွေများကိုစောင့်ရှောက်သောအရာကိုယေဘုယျအားဖြင့်ဖြစ်ပါသည်။
မိတ်ဆွေကောင်း၏နောက်ထပ်အရည်အသွေးမြင့်ခြွင်းချက်မရှိသင်တို့အဘို့ဂရုစိုကျသူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအစောင့်ရှောက်မှုအသေးလုပ်ရပ်များသို့မဟုတ်ကြီးမားသောလုပ်ရပ်များအတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်စောင့်ရှောက်မှုလေ့သိသာသည်။ ပြည်သူ့အများဆုံးမကြာခဏရိုးရိုးသားသားနှင့်အရခွေုံသောစောင့်ရှောက်မှုအကြားခြားနားချက် (အတွေးအခေါ် Catalog) ကိုငါသိ၏။ စောင့်ရှောက်မှုအရှိဆုံးပြောရာမှာအချိန်လေးသင်တစ်ဦးခက်အစက်အပြောက်၌ရှိကြ၏သို့မဟုတ်အခွင့်အလမ်းများမရှိခြင်းအခါဖြစ်ပါသည်, နှင့်သင့်မိတ်ဆွေတစ်သင်သည်ကံဇာတာသို့ခုန်သို့မဟုတ်ပိုကောင်းတဲ့အခွအေနပေးရသူသို့မဟုတ်သူမ၏အကောင်းဆုံးပါဘူး။ တစ်ဦးကမိတ်ဆွေကောင်းသင့်ရဲ့သုခချမ်းသာအဘို့အထွက်ကြည့်, သင်၏ကိုယ်ပိုင်အဘို့ဘေးဖယ်သူသို့မဟုတ်သူမ၏စိုးရိမ်ပူပန်တတ်၏။ စောင့်ရှောက်မှုမကြာခဏအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်ဆက်စပ်သည်: သူငယ်ချင်းများကိုသင်တို့ဆီသို့စိတ်ကိုလွှမ်းမိုးအာရုံစူးစိုက်မှုပေးပါရန်မလိုပါ, ဒါပေမယ့်သူကသင့်ရဲ့မိတျဆှေကသင်၏ချင်လိုအပ်ချက်များနှင့်ပြဿနာများဂရုစိုကျကွောငျးသိသာဖြစ်သင့်သည်။ သူသို့မဟုတ်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်ဒီလောက်စွန့်နေစဉ်အများဆုံးအစွန်းရောက်ဥပမာမိတ်ဆွေတစ်ဦး၏အသက်တာကိုချွေတာတစ်စုံတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်စောင့်ရှောက်မှုရှုခြင်းကိုခံရနိုင်ရန်အတွက်အရေးပါတဲ့ပြုမူသောအမှု, ဤအမျိုးအစားများတွင်ပြသခံရဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ ခြွင်းချက်မရှိစောင့်ရှောက်မှုခက်ခဲကြိမ်ကာလအတွင်းဖုန်းခေါ်ဆိုမှု, စာသားများ, ဒါမှမဟုတ်ဆက်သွယ်ရေး၏အခြားပုံစံများအတွက်သရုပ်ပြနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာမိတ်ဆွေတစ်ဦးတစ်ပါတ်အကြာတစ်ဆိုင်မှာပျော်မွေ့သောအရာကိုသတိရနှင့်လက်ဆောင်တစ်ခုအဖြစ်သူ့ကိုသို့မဟုတ်သူမ၏ထိုသို့ဝယ်ယူနဲ့တူစွာအောက်မေ့၏ရိုးရှင်းလုပ်ရပ်များဖြင့်ပြသနိုင်ပါသည်။ ဤရွေ့ကားသို့သော်သာအနည်းငယ်ဥပမာဖြစ်ကြသည်။ ဒီစိုးရိမ်ပူပန်စောင့်ရှောက်မှုမရှိရင်ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုနက်ရှိုင်းခြင်းနှင့်နှလုံးအားနည်းနေလိမ့်မည်။
#good #friends #life